July 28, 2019 - CeleLove
၁၂ဘီးဘောက်ဆာယာဉ်မှ လမ်းဖြတ်ကူးသူ ကျောင်းသူကလေးငယ်တစ်ဦးအား ဝင်ရောက်တိုက်မိရာ နေရာတွင်သေဆုံး (ရုပ်သံ)
July 28, 2019 Cele Love 0
၁၂ဘီးဘောက်ဆာယာဉ်မှ လမ်းဖြတ်ကူးသူ ကျောင်းသူကလေးငယ်တစ်ဦးအား ဝင်ရောက်တိုက်မိရာ နေရာတွင်သေဆုံး (ရုပ်သံ) ကျောက်တံခါး ဇူလိုင်၂၇ရက် ၁၂ဘီးဘောက်ဆာယာဉ်မှ လမ်းဖြတ်ကူးသူ ကျောင်းသူ ကလေးငယ်တစ်ဦးအား ဝင်ရောက်တိုက်မိရာ နေရာတွင်သေဆုံး သွားခဲ့ပါတယ် …။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံခါးမြို့မရဲစခန်းအပိုင် ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းဟောင်း မိုင်တိုင်အမှတ်၁၀၁/၆နှင့်၇အကြား အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ အနီး၌ ဇူလိုင်၂၇ရက် ညနေ၄နာရီခန့်က လမ်းဖြတ်ကူးသူ […]
မြေနုကျွန်းကိစ္စ လူအစုလိုက် အသတ်ခံရမှုမှာ သေဆုံးခဲ့ရသူတစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်သူရေးလိုက်တဲ့ ရင်တွင်း ပေါက်ကွဲစာ
မြေနုကျွန်းကိစ္စ လူအစုလိုက် အသတ်ခံရမှုမှာ သေဆုံးခဲ့ရသူတစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်သူရေးလိုက်တဲ့ ရင်တွင်း ပေါက်ကွဲစာ ကျမက​နေရာတကာမာပါ​နေတဲ့ မိန်းက​လေးတ​ယောက်​မဟုတ်​ပါဘူး ခပ်​စွာစွာမိန်းက​လေးတ​ယောက်​ရိုင်းဆိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့မိန်းက​လေးတ​ယောက်​လဲ မဟုတ်​ပါဘူး ကို့အလုပ် ​ကိုယ်လုပ်​ပီး ​အေး​ဆေး​နေတတ်​တဲ့ မိ​​ကောင်း ဖခင်​သမီးတ​ယောက်​ပါ …။ ဒါပေမယ့် ခုကိစ္စမာ ဘယ်​လိုမှမ​နေနိုင်​လို့ ခံစားချက်​ပြင်းလွန်းလို့ တင်​ပါရ​စေ …။ ရိုင်းဆိုင်းတဲ့စကားလုံးများပါခဲ့ရင်​လဲကြို​တောင်းပ​န်​ပါတယ်​ တခါမှလဲရိုင်းဆိုင်းတဲ့စကားနဲ့ […]
ပြည့်တန်ဆာ လုံးဝမရှိ၊ သူတောင်းစားလဲ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ စိတ်အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲထားတဲ့နိုင်ငံ။ တောင်ပေါ်နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခု၊ လူဦးရေ ၆ သိန်းကျော်သာရှိပြီး ဆေးလိပ် သောက်တဲ့သူ ၁%ပဲရှိပါတယ် Giordano ဂျင်းဘောင်းဘီ ဘာဖက်ရှင် ညာဖက်ရှင် လဲ တွေ့ရမှာ မဟုတ်သလို ရိုးရာအမျိုးသား […]
အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအတွင်း သုတ်ရည်များ ထွက်နေပြီး အမျိုးသမီးသီးသန့်အိမ်သာခန်းအနီး လူတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှု
အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအတွင်း သုတ်ရည်များ ထွက်နေပြီး အမျိုးသမီးသီးသန့်အိမ်သာခန်းအနီး လူတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချသေဆုံးမှု July 28, 2019 ပြည်တွင်းသတင်း အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအတွင်း သုတ်ရည်များ ထွက်နေပြီး အမျိုးသမီးသီးသန့် အိမ်သာခန်း အနီးရှိ သရက်ပင် အောက်တွင် ဆိုင်အလုပ်သမား တစ်ဦး ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ […]
ခါးပိုက်နှိုက်နေမှန်း သိတာတောင် မပြောရဲကြတော့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝ…
ခါးပိုက်နှိုက်နေမှန်း သိတာတောင် မပြောရဲကြတော့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝ… ” ခါးပိုက်နှိုက်နေမှန်း သိနေတာတောင် ကြည့်သာကြည့်နေရပြီး မပြောရဲကြတော့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝ ” ကိုယ် ဒီနေ့မနက် သင်တန်းသွားတော့ ၆၂ ကားပေါ်မှာ လူတွေတအားကြပ်နေတော့ အဲ့လူနှစ်ယောက် အနားကို ကပ်လာတာ သိတော့ အိတ်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တာ ကိုယ့်လက်ကို […]
အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကို မိဘတွေက သဘောမတူလို့ ခွဲကြတာတဲ့ ….(Video) အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကို မိဘတွေက သဘောမတူလို့ ခွဲကြတာတဲ့ဗျာ ….. တကယ်ချစ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေမှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဗျာ သူတို့ချင်း ဖြူဖြူစင်စင် ချစ်ခင်ကြတာဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလေ …။ လူကြီးမိဘတွေပေးစားတဲ့ အိမ်ထောင်းရေးတိုင်း အဆင်ပြေတာမှမဟုတ်တာ …။ လူကြီးတွေသဘောတူတဲ့သူပဲ […]
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အတ္တကမ္ဘာ ကျွန်တော်တို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေနံချောင်းမြို့နယ် ဖရဲကျွန်းကျေးရွာနှင့်ကန်သာကျေးရွာတို့ မြေနုကျွန်းအငြင်းပွားရာမှ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာလူသတ်မှုကြီး ပရိတ်သတ်တွေကြးသိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့ …။ ယနေ့ခတ်မှာနည်းပညာတွေ တိုးတက်လာသလောက် လူတွေကိုယ်ကျင့်တရားတွေဆုတ်ယုတ်လာတယ် …။ တရားမိုးတွေရွာနေ သလောက် မေတ္တာရေတွေခန်းခြောက်လာကြတယ် …။ လောဘ ဒေါသ မောဟ ကိလေသာတွေအားကြီးလာကြတယ် …။ ဒီမြေယာအငြင်းပွားမူ […]
ခင်ပွန်းသေတယ်ထင်ပြီး ကလေးတွေနဲ့ရေထဲ ခုန်ချသတ်သေခဲ့ပေမယ့် သူ့ခင်ပွန်းတကယ်သေတာ မဟုတ်တဲ့အခါ…(ရုပ်သံ)
ခင်ပွန်းသေတယ်ထင်ပြီး ကလေးတွေနဲ့ရေထဲ ခုန်ချသတ်သေခဲ့ပေမယ့် သူ့ခင်ပွန်းတကယ်သေတာ မဟုတ်တဲ့အခါ…(ရုပ်သံ) အခုတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ရုပ်သံကတော့ သိသူတွေကို ငိုရခက် ရယ်ရခက် ဆိုသလို ဖြစ်စေမယ့် သတင်း ရုပ်သံဖိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ရုပ်သံထဲမှာ တရုပ်အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ သူ့ယောက်ျား မတော်တဆမှုမှာ သေသွားခဲ့ပြီဆိုပြီး သားသမီး နှစ်ယောက်နဲ့ […]
ကိုယ်တိုင်က သေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေပေမယ့် ညီမလေးကိုရအောင်ကယ်ခဲ့တဲ့ ( ၅ )နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်…
ကိုယ်တိုင်က သေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေပေမယ့် ညီမလေးကိုရအောင်ကယ်ခဲ့တဲ့ ( ၅ )နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်… စစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ မိသားစုနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့သူတွေ မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေ ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ သေကွဲ ရှင်ကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာမှ ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းဆိုသလိုပဲ လူတွေရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ် ကြမ်းတမ်းယုတ်ညံ့တဲ့အတွင်းစိတ်တွေကို ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာ ဟန်ဆောင်မှုကင်းစွာမြင်တွေ့ရမှာပါ …. ။ဆီးရီးယားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကတော့ အသက် […]
အိမ်မှာတော့ ချက်စားနေတဲ့ဆန်ပုံးထဲမှာ ချင်း( ဂျင်း ) တက်လေးတစ်တက် ထည့်ထားလိုက်… တုတ်ကွေး ….. အခုချိန်ခါက တုတ်ကွေးရာသီလို့ပြောရမလား …. ။ တော်တော်များများ ဖျားနေတာတွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ ဖြစ်တာ ပိုများနေတယ်။ ပြီးတော့ တုတ်ကွေးဆိုတာ ဖြစ်လာမှ ဆေးကုတော့လည်း ချက်ချင်းမပျောက်တတ်ဘူးဗျ …. […]